စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ရောင်းချရန်အတွက်အိမ်အပြင်ဘက်အလှဆင်သောကြေးဝါမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းရေပန်းပန်းပု | ။ Atisan Works
Keyword: Mermaid ပန်းပု
TAG: ရောင်းရန် Mermaid Statues နှင့် Dolphin ကြေး Mermaid နှင့် Dolphin Sculpture ဘ ၀ အရွယ်အရွယ်ကြေး Mermaid Statue အပြင်ဘက်တွင်ကြေးကြေး mermaid ရုပ်ထု
ကြေးဝါ, ကြေးဝါ, စကျင်ကျောက်, သတ္တု
အဆောက်အ ဦး အပြင်ဥယျာဉ်အလှဆင်ခြင်း
H ကို: 100-200cm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ဗဓေလသစ် / ကြေး / ကြေး / ကြေးဝါ
ပုံမှန်အမြင့် ၁.၃ မီတာမှ ၁.၈ မီလီမီတာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည်
မူရင်းအရောင် / တောက်ပသောရွှေ / တုပရှေးဟောင်း / အစိမ်း၊ အနက်ရောင်တို့ကိုတုပခဲ့သည်
Surface Polishing ဖြင့်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
-20 ကနေအပူချိန်နှင့်အတူတရားဝင်℃ 40 အထိ℃။ မိုးသီး၊ မကြာခဏမိုးရာသီနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနေရာမှဝေးသည်။
မိသားစုခန်းမ၊ အိမ်တွင်း၊ ဗိမာန်တော်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မြေကွက်၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်စသည်တို့အတွက်ဖြစ်သည်
အပိုမျက်နှာသာရရန်ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့မဟုတ် L / C, T / T က
နတ်သမီးပုံပြင်၊ နတ်ဘုရားရုပ်ထု၊ ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်၊ ဂွမ်နင်းရုပ်ထု၊ တိရစ္ဆာန်ရုပ်ထု၊ ခြင်္သေ့ကြေးဝါရုပ်တု၊ ခြင်္သေ့ခေါင်းရုပ်တု၊ မြင်းရုပ်ထု၊ ခြင်္သေ့ရုပ်ထု၊ ဆင် ရုပ်ထု၊ ရွှေလင်းတရုပ်တု၊ အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးရုပ်ထု၊ ဝတ်လစ်စလစ်ယောက်ျားရုပ်ထု၊ လိင်ရုပ်ပွားတော်၊ ဥယျာဉ်ရုပ်ထု၊ ကလေးသူငယ်ရုပ်ထု၊ ကြေးဝါပန်းအိုး၊ ကြေးဝါကော်လံနှင့်တိုင်၊ ရုပ်ထု၊ စိတ္တဇရုပ်ထု၊ ကော်ဖီစားပွဲရုပ်ထု၊ သံမဏိပန်းပုစသဖြင့်
ဒဏ္legာရီအဆိုအရမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းသည်ခါးကိုအခြေခံသည်။ အများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းရှိလှပသောအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသည်သွေးဆောင်မှုနှင့်လျင်မြန်စွာလွတ်မြောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဖောက်သည်များစွာတို့သည်ဤဒဏ္aryာရီပုံပြင်များကိုနှစ်သက်ကြသဖြင့်သင့်အတွက်ရွေးချယ်ရန်ကြေးဝါ mermaid ပန်းပုအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါ mermaid ပန်းပုများကိုလက်ခံပါသည်။ အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းနှင့်ပုံသဏ္noာန်ရှိသော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော mermaid ပန်းပုများကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်အထူး mermaid ပန်းပုကိုလိုချင်ပါက၊ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ကြေးဝါထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကျွမ်းကျင်သောပန်းပုဆရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဓါတ်ပုံများကိုသင်ပေးပြီးသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လုပ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြေးဝါပန်းပုများကိုကမ္ဘာသို့တင်ပို့ပါသည်၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေ၊ ၎င်းကိုသင့်ထံသို့အချိန်မီပို့ဆောင်ပါမည်
မေး Wဦး ထုပ်က ခန့်မှန်းထားသည် ပို့ဆောင်ချိန်?
A: အတွင်းမှာ 30 ရက်အနည်းငယ်အကြာ getting အောက် -ငွေပေးချေမှု။
မေး Wဇich ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းs ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်?
A:၁ ။အားဖြင့် T / T။ ၃၀% ဟုတ်တယ် အပ်ငွေ ၇၀% နှင့် ဟုတ်တယ် ပေးဆောင် ထုတ်လုပ်မှုအတည်ပြုအပေါ်သို့။
၂ ။အားဖြင့် L / C။ ဖြစ်ရမည် မျက်မှောက်မှာ အသိအမှတ်ပြုဘဏ်နှင့်အတူ။
၃ ။နမူနာကုန်ကျစရိတ်များအတွက် Western Union သို့မဟုတ် Paypal ။
မေး ဘာလဲသူအရည်အသွေး အာမခံချက်?
A: ၁ ။စကျင်ကျောက်အနုပညာစံနှစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီ။
က) ASTM C503-05 နှင့် ASTM C1526-03 အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် သဘာဝစကျင်ကျောက် ၏ ကျောက်မိုင်း။
ခ) Senior လက်သမားရဲ့ အရည်အသွေး စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ ' တောင်းဆိုချက်ကို။
(ခ)Senior လက်သမားရဲ့ အရည်အသွေး စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ ' တောင်းဆိုချက်ကို။
၃ ။တင်းကျပ်သောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လုပ်နိုင် တတိယပါတီလက်ခံပါ''ထိုကဲ့သို့သော SGS သို့မဟုတ်စသည်တို့ကဲ့သို့ s ကိုစစ်ဆေးခြင်း။
မေး Wဦး ထုပ်က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်?
A: ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (သို့) လေယာဉ်မှူးမှလေယာဉ်ပျံတက်ခြင်းအတွက် ၁ ။
၂။ သင့်တော်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် DDU ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါ။
ရှေ့သို့ အရောင်းအ ၀ ယ်အလှဆင်ကျောက်ဆောင်ဥယျာဉ်မှထုတ်ကုန်များရေစကျင်ကျောက်ခေရုဗောစမ်းရေ
နောက်တစ်ခု: ခေတ်သစ်သဘာ ၀ ကျောက်တုံးဥယျာဉ်သည်စကျင်ကျောက်များကိုပြင်ပရေစမ်းများရောင်းချခဲ့သည်
ထုတ်ကုန်သစ်အတွက်အလှဆင်အတုရေတံခွန် fou ...